Ithempelesha ububanzi: Iphampu lokushisa kwegesi 0 0 -80 ℃; Ukushisa okusebenzayo uketshezi 15 ℃ (ububanzi 0 ℃ -60 ℃)
Vumela indawo yokuhamba: Ayinazo izinhlayiya eziqinile, ezingenakunyibilika noma igesi encibilikayo kancane kuketshezi olusebenzayo
Indlela yokungenisa nokuthumela: 50-400mm
Kwenzelwe ukwakhiwa kwe-hydraulic, impeller isebenzisa isilinganiso sobubanzi obububanzi nobubanzi, ukuze iphampu likwazi ukusebenza kahle kakhulu kunamanye amaphampu ochungechunge lapho lithola ivolumu efanayo yokupompa. Ngasikhathi sinye, ukwakheka kwesakhiwo okulula kwenza ukusebenza kwepompo kuzinze futhi kuthembeke, futhi umsindo uphansi.
Isakhiwo esisodwa esisebenza ngesakhiwo esisodwa esivundlile, esilula futhi esinokwethenjelwa, okulula ukusigcina. Isakhiwo somzimba wepompo ngokuxuba singenza ipompo elilodwa lihlangabezane nezidingo zezimo zokusebenza ezimbili.